Ụmụọrụ Intanet - Directories
Edebere ederede ndekọ anyị maka chọọchị nke Kraịst na ọ dịghị ọzọ. Anyị agaghị edepụta ndị chọọchị na-eji ngwá egwú na ọrụ ofufe ha, ma ọ bụrụ na chọọchị gị na-eji aha dị iche iche dee biko debanye aha ebe a.
Tupu ịdekọ akụkọ nke ụka gị ma ọ bụ mee mmelite ọ bụla ị ga-ebu ụzọ banye maka "Akaụntụ Nbanye". Nke a ga-eme ka ị nweta ohere itinye ihe ọmụma nke ọgbakọ gị n'akwụkwọ ndekọ anyị mgbe ọ bụla ọ dị mkpa. A na-achọ ụgwọ ọrụ ego maka $ 29 (USD) kwa afọ. N'elu nnata nke ugwo ị ga-enwe ike itinye data gị n'ime "Nzukọ nile nke Kraịst na Chọọchị Kraịst" na "Chọọchị Kraịst Online Directory" (ụka na ebe nrụọrụ weebụ) na-enweghị ego ọ bụla n'afọ.
Ị nwere ike ịkwụ ụgwọ maka "Akaụntụ Nbanye" gị na kaadị debit ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ. Internet ministri na-eji a ala ugwo nkesa site PayPal.com.
Ụgwọ gị ga-enyere anyị aka ịnọgide na-arụ ọrụ a bara uru maka ụka nke Kraịst site na ụwa.
Ka Chineke gọzie gị, na-ekele gị maka itinye data nke ọgbakọ gị na "Nzukọ ụwa dum nke ụka nke Kraịst" na "Chọọchị Christ Online".
Ụlọ ụka gị ma ọ bụ ozi gị ọ dị mkpa maka ebe nrụọrụ weebụ?
Anyị nwere ike inyere aka. Ụlọ ọrụ Weebụ weebụsaịtị anyị dị mfe ma nweere onwe iji iji ọ bụla n'ime ụlọ ọrụ weebụ anyị akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị nwere ike ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ ọkachamara dị ọnụ ala. pịa ebe a ma ọ bụ na weebụsaịtị Weebụ maka nkọwa ndị ọzọ.